Liverpool Oo Shaacinaysa Saxeexa Difaacii Xallin Lahaa Mushkiladda Ka Haysata Khadka Dambe | Laacibnet.net
Liverpool Oo Shaacinaysa Saxeexa Difaacii Xallin Lahaa Mushkiladda Ka Haysata Khadka Dambe
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa qarka u saaran inay dhamaystirto saxeexii ugu horreeyey ee difaacii xallin lahaa qalalaasaha dhaawacyada ee ku habsaday xili ciyaareedkan.
Liverpool ayaa weyday Virgil van Dijk iyo Joe Gomez oo ahaa labadii ciyaartoy ee ay ku xisaabtamayeen inay xili ciyaareedkan ku dagaal galaan, waxaana soo gaadhay dhaawacyo ay kaga maqnaanayaan xili ciyaareedkan oo dhan.
Laakiin Joel Matip oo isaguna ahaa ninka halkaas sii buuxinayay balse ahaa mid u nugul dhaawacyada ayaa waxay Jurgen Klopp ku noqotay inuu isbeddel ku sameeyo khadka dhexe oo uu dib usoo celiyo tiir-dhexaadkii fursadda hal-abuurka siin jiray Wijnaldum iyo Jordan Henderson, isla markaana isku dhigi jiray khataraha goolka ku socda ee Fabinho oo hadda ka ciyaara difaaca.
Dhibaatadda ugu weyn ee intaas u raacday ayaa waxay tahay in Matip uu dhaawacmay, kaddibna uu Rhys Williams iyo Nat Phillips u kala doortay midkooda soo labaynaya Fabinho, halka uu mar tijaabiyey Henderson oo difaac kala ciyaaray Fabinho, ayna guul-darraysteen.
17 ciyaarood oo horyaalka ah oo ay Liverpool dheeshay, waxa laga dhaliyey 21 gool, waxaanay taasi ka dhigan tahay in ciyaar walba laga dhaliyey hal gool iyo dheeraad, waana arrin aan looga baahnayn inay ku dhacdo koox horyaalka doonaysa inay difaacato.
Bishan January ee uu suuqu furmay ayaa muhiim u ah Liverpool, waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan inay doonayaan Sergio Ramos, David Alaba iyo Sven Botman, laakiin dhamaantood waxay iman karaan marka uu xili ciyaareedku dhamaado oo kali ah haddii ay ku qanciyaan inay Anfield waqti ku qaataan.
Si kastaba, Liverpool ayaa la sheegay inay hadda u dhowdahay inay heshiis la gaadho difaac yimaadda bishan January, waana Ben White oo u ciyaara Brighton.
Laacibkan oo hore ugu soo ciyaaray Leeds United ayaa ka mid ah ciyaartoyda difaaca ee ay naadiyada waaweyn raadinayaan, waxaana uu xal degdeg ah u noqon karaa dhibaatada Liverpool ee dhinaca difaaca.
Ben White ayaa ah 23 jir mustaqbal wanaagsan inuu leeyahay lagu tilmaamo oo ku wanaagsan difaacista, si gaar ahna takhasus ugu ah marka ay kali isku noqdaan hal weeraryahan. (1vs1).
Ninkaan waa shub hadey hesho